Obama oo digniin u jeediyay Trump - BBC Somali
Obama oo digniin u jeediyay Trump
Madaxweyne Obama ayaa xalay qabtay shirkiisii jaraa'id ee ugu dambeeyay ka hor inta uusan rasmiyan xilka ku wareejin madaxweynaha la doortay Donald Trump berri oo Jimca ah.
Kaddib siddeed sano oo uu hayay xukunka dalkaasi ayaa Obama waxa uu digniin u dirayay Madaxweynaha la doortay Donald Trump, taa oo ah in uusan talo la'aan isku dayin in uu badalo siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka, arrimaha qaarkoodna ay tahay in uu taxaddar ka muujiyo.
Arrimaha uu sida gaarka ah farta ugu fiiqay ayaa waxaa ka mid ah xiriirka mareykanka la leeyahay dalka Ruushka iyo colaadda u dhaxeysa Falastiyiniinta iyo Israa'iil.
Obama ayaa mar uu ka hadlayay coladdaada gaamuurtay ee Israa'iil iyo Falastin waxa uu sheegay in ay suurtagal tahay in la luminayo fursad lagu helo karo Falastin iyo Israa'iil oo ah labo dal oo deris ah nabadna ku wada nool, waxa uuna difaacay qaraar bishii hore uu ansixiyay golaha ammaanka Qaramada Midoobey oo lagu cambaareeyay deegaamaynta ay Israa'iil ka waddo dhulka Falastiyiniinta ee daanta galbeed iyo bariga magaalada Quddus.
Madaxweyne Obama waxa uu sidoo kale uga digay madaxweynaha xilka kala wareegaya ee Donald Trump in uusan ku deg degin arrimaha qaar ee xasaasiga ah, taa oo u muuqatay in uu uga jawaabayay hadal uu horey u jeediyay Trump oo ahaa in Safaaradda Mareykanka ku leeyahay Israa'iil uu ka soo rarayo Talaabiib oo keenayo Quddus, arrintaa oo jebinaysa siyaasaddii soo jireenka ahayd ee Mareykanka.
Trump: Meesha kama wada saarayo Obamacare
Dhanka kale, Madaxweyne Obama oo ka jawaabayay su'aal ku saabsanayd xiriirka Mareykanka iyo Ruushka ayaa waxa uu sheegay in isbadalka ku yimaaday siyaasadda Moscow ee ku wajahan arrimaha caalamka ay saameyn weyn ku yeelatay xiriirka labadani waddan.
Obama waxa uu uga digay Donald Trump in uu Ruushka ka qaado xayiraadaha saaran ilaa inta uu ka laabanayo waxa uu ku tilmaamay xad gudubka iyo faragelinta uu ku sameeyay madaxbannaanida dadka reer Ukraine.
Trump ayaa horey u shaaciyay suurtagalnimada in uu xayiraadahaasi ka qaadayo xukuumadda Moscow, arrintaa oo uu sheegay in uga golleeyahay in lagu dhimo hubka niyuukleerka.
Madaxweyne Obama, waxa uu sidoo kale ballan qaaday in uusan ka aamusi doonin arrimaha qaar ee ka jira gudaha Mareykanka balse waxa uu saxaafadda ka codsaday in la siiyo fursad uu ku nasto oo uusan jeclayn in mar dhow uu codkiisa ka maqlo saxaafadda.